मलेसियाले देखायो यस्तो चमत्कार – Jaljala Online
असार २५, काठमाडौँ । सन् १२६० मा अरनिको तिब्बत गएपछि नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान सुरु गरेको इतिहास रहेको संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको पुस्तक ‘कलाकार अरनिको’ मा उल्लेख छ ।
यो खबर रमेश भारतीले खबरहबमा लेखेका छन् । चीनको तिब्बतमा करीब साढे ७ सय वर्ष पहिला अरनिकोको नेतृत्वमा ८० जना मुर्तिकारहरु गएदेखि नेपालीहरु रोजगारका लागि विभिन्न मुलुकमा पुग्ने चलनको शुरुवात भएको मानिन्छ ।
त्यसयता नेपाली रोजगारीको खोजीमा भारत हुँदै तेस्रो देश जाने क्रम बढ्दै गएको हो । हाल भारतसहित करिब ५० लाखभन्दा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत विभिन्न देशमा कार्यरत छन् । सन् १८७५ देखि नेपालीहरू मलेसिया जान थालेको बारे देवेन्द्र सुर्केलीले लेखेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली युवाको प्रमुख रोजगार गन्तव्य देशभित्र मलेसिया पनि पर्छ । हाल करिब ८ लाख नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
नेपाली कामदार लैजान नपाएपछि मलेसियाले गर्यो यस्तो तयारी, अब के होला ?
पहिलो रोजाईमा पर्दै आएका नेपाली कामदार लैजान नपाएपछि अन्तत: मलेसियाले नेपाली कामदारको विकल्प खोजेको छ।
आगामी अगष्ट महिना भित्रै बंगलादेशबाट कामदार आपूर्ति गर्ने मलेसियाको तयारी छ। प्रमुख स्रोत गन्तव्य नेपालबाट १३ महिनासम्म कामदार लैजान नपाएपछि मलेसियाका विदेशमन्त्री साइफुद्दीन अब्दुलाह बन्द रहेको बंगलादेशबाट कामदार लिने विषयमा छलफल गर्न बंगलादेश आइपुगेका छन्।
मलेसियालि विदेशमन्त्री साइफुद्दीनले बंगलादेशी कामदारका लागि गतवर्ष डिसेम्बरदेखि बन्द रहेको मलेसियाको ढोका अगष्ट महिना भित्रै खुल्ने आशा व्यक्त गरेकोको भनाइ उदृतगर्दै बंगलादेशका संचार माध्यमले भनेका छन्- ‘विदेशी कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा प्रधनमन्त्री महाथिरले नै एउटा प्रक्रियाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ त्यहि नेतृत्वले कामदार आपूर्तिको विषयमा भविष्यमा थप निर्णय गर्नेछ। बंगलादेशकालागि एउटा नयाँ अवसर खुल्दैछ।’
बंगलादेशले आफ्नो देशबाट कामदार लिन उच्च राजनीतिक स्तरबाटै पटक-पटक आग्रह गरे पनि मलेसियाले भने बंगलादेशबाट कामदार लिन इच्छा देखाएको थिएन। तर मलेसियाली कम्पनीमा कामदारको चरम अभाव हुँदा समेत नेपालले कामदार नपठाएपछि मलेसिया नेपालको विकल्प खोज्न अघिसरेको हो।
मलेसियाले बंगलादेश खोलेको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमाथि पर्नेछ। ‘मलेसियाले बंगलादेशी कामदार लिन सुरु गर्यो भने नेपालीले पाउँदै आएको कोटा काटिने निश्चित छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालीले पाउँदै आएको रोजगारीमा मात्र नभइ समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ’ एक रोजगार व्यवसायीले भने-‘त्यो भन्दा पहिला नेपालबाट कामदार जाने प्रक्रिया सुरु गर्न आवस्यक छ।’
श्रम सम्झौता भएको ८ महिना बित्दा समेत कामदार जाने प्रक्रिया सुरु नहुँदा त्यसले दुई देशको कुटनीतिक सम्बन्धमै असर पर्ने भन्दै सरकारलाई यथासक्य छिटो निर्णय लिन सुझाउँछन् वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ।
‘हाम्रो अडानले वर्षौ सम्म हुन नसकेको श्रम सम्झौता त भयो। तर हाम्रै अडानका कारण नेपालीले पाउँदै आएको रोजगारी नखोसियोस। धेरै कुरा श्रम सम्झौता अघि नै टुंगिनु पर्थ्यो तर थोरै काम गरेर धेरै कुराको जिम्मा हामीले सम्झौतापछि बन्ने प्राविधिक समितिलाई जिम्मा दियौं। दुई देशका प्राविधिक बसेर टुंग्याइसकेको कुरालाई लिएर बिबाद गर्नु राम्रो होइन। अब त्यो बिबादको फाइदा अरु देशले नलिउन। त्यसमा नेपाल सरकार समयमै सजग बन्नुपर्छ। एउटा निर्णय गरेर कामदार जाने बाटो खोल्नु नै अहिलेलाई सबैको हित हुन्छ’ गुरुङले भने।
नेपालीपक्ष नयाँ प्रक्रियाबाट कामदार लिनुपर्छ भन्ने अडानमा छ भने मलेसियाले विगतको प्रक्रियामा कुनै फेरवदल नहुने प्रस्ट पारिसकेको छ। दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौतामा कामदार आपूर्ति गर्दा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भएपछि प्रक्रियाले कुनै असर नगर्ने मलेसियाली अधिकारीले बताउँदै आएका छन्।
मलेसियाले विगतको भिसा प्रक्रिया परिवर्तन नगर्ने निश्चित देखिएपछि नेपालीपक्ष अहिलेलाई मलेसियाले लागु गरेको भिसा प्रक्रियालाई स्वीकार्न करिव-करिव राजि भएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले बतायो। तर विगतमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका संस्थाको संख्यामा वृद्धि हुनुपर्ने अडानमा श्रम मन्त्रालय टसमस नभएपछि स्वास्थ्य संस्था सुचिकृत हुने मापदण्ड पठाएको थियो।
त्यहि मापदण्डकै आधारमा श्रम मन्त्रालयले ९९ सयवटा स्वास्थ्य संस्थालाई सुचिकृत गरेर तिनको नामावाली मलेसिया पठाएको छ। तर मलेसियाले भने स्वास्थ्य संस्था थप्ने/नथप्ने कुनै जवाफ पठाईसकेको छैन।
देशभर आज कस्तो हुन्छ मौसम ? यस्तो छ मौसम पूर्वानुमान, पढ्नुहोस
Posted on December 14, 2019 December 14, 2019 Author Jaljala Online
मंसिर २८, काठमाडौं । पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले आज पनि देशैभरीको मौसम परिवर्तन हुनेछ । शनिबार मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको पूर्वानुमानको बुलेटिनका अनुसार देशको मध्य र पश्चिमी पहाडी भूभागमा र पूर्वी भूभागमा बदली भई हल्का वर्षा र उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ । शनिबार विहान विभिन्न स्थानमा हल्का वर्षा […]
दाङमा आफैले सामाजिक सञ्जालमा श्र’द्धा’ञ्जली लेखेपछि एक युवाले गरे आ’त्मह’त्या
Posted on October 17, 2019 Author Jaljala Online
असोज २९, दाङ । दाङमा एक युवाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा आफैले आफुलाई नै हा’र्दिक श्र’द्धा’ञ्जली लेखेको केही बेरमै आ’त्मह’त्या गरेका छन् । जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ निवासी २२ बर्षीय लक्ष्मिप्रशाद देवकोटाले आफ्नो फेसबुकवालमा आफै आफ्नो तस्विर अपलोड गरि हा’र्दिक श्र’द्धा’ञ्जली लेखेको केही बेरमै आ’त्मह’त्या गरेका हुन । देवकोटाले पहिलो पटक मंगलवार दिउँसो १ […]